Red ( 40g)
Gold ( 50g)
Silver ( 50g)
100% Arabica Blue Pond Specialty Coffee 320g - Whole Bean
မြန်မာနိုင်ငံတွင် USDA နှင့် EU Certificate လက်မှတ်ရ Organic Coffee များကို ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိရောင်းချနေသော Genius Shan Highlands Coffee လုပ်ငန်းမှ ထုတ်လုပ်ပါသည်။ အရသာ အနေဖြင့် အခါးအရသာပိုပြီး အချိုနဲ့ ..
100% Arabica Coffee - Coarse Ground
100% Arabica Coffee - Fine Ground
100% Arabica Coffee - Whole Bean
100% Arabica Drip Coffee Sachet 100g - Coarse Ground
100% Arabica Pea Berry Coffee (Limited) - 220g
Peaberry, known in Spanish as caracolillo, isatype of coffee bean. Normally the fruit ("cherry") of the coffee plant contains two seeds ("beans") that develop with flattened facing sides, but someti..
Cafe Classic Coffee
About productGano Cafe Classic. ကို လင်ဇီး ၏ အနှစ်သာရ. နှင့် အကောင်းဆုံး ဘရာဇီး ကော်ဖီ တို့ဖြင့် နှစ်မျိုးတည်း ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားသော. ( Instant Black Coffee ) ဖြစ်ပါတယ်အချိုရှောင်လိုသူမျ..
About productGano Coffee ကို ဘရာဇီးကော်ဖီမလိုင်မဲ့နို့မှုန့် သကြားနှင့် လင်ဇီး၏ အနှစ်သာရများဖြင့် ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားသည့် ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သော ကော်ဖီဖြစ်ပါသည်။ Gano Coffee ကို သောက်သုံးခြင်းဖြင့..
Finest Classic Sweetener - 50 g
About The Product Zero Calorie, Best-tasting sugar replacer, Suitable for Type2Diabetes..
About productGinseng Tongkat Ali. ကို လင်ဇီး ၏ အနှစ်သာရ. နှင့် ဂျင်ဆင်း အဆီ .ယူရီရိုမာလွန်ဂျီဖိုလီဟာဂျက် .မလိုင်မဲ့ နို့မူန့်.. သကြား တို့ဖြင့် ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားပြီး ကျန်းမာရေး အတွက် အထူးကောင..
About productMocha ကော်ဖီကို လင်ဇီး၊ ဘရာဇီးကော်ဖီနှင့် CoCoa တို့ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားသောအထူးစိမ့်စိမ့်အရသာလေးကြောင့် တမူထူးခြားသော အရသာသစ်ကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းအားနည်းသူများ ..